Hanampy ny Attribution Media sy ROI ny bokotra mividy? | Martech Zone
Alarobia 12, 2015 Alakamisy 5, 2015 Douglas Karr
Ny bokotra mividy dia ny fironana vaovao mafana amin'ny haino aman-jery sosialy, saingy tsy mahazo hery firy izy ireo. Raha ny marina, an Invesp Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa ny varotra varotra sosialy dia 5% monja amin'ny vola miditra antsinjarany amin'ny taona 2015. Betsaka amin'ireo tranonkala sosialy no mbola miady mafy mba hahazoana fahatokisan'ny mpanjifa, noho izany dia mila manaporofo ireo sehatra fa mihoatra noho ny fahaizan'izy ireo ara-piarahamonina handresy azy ireo fotsiny.
Mbola mafana ihany aho amin'ny lazan'ny bokotra fividianana sosialy amin'izao fotoana izao. Tsy hoe tsy hampihatra azy ireo aho - azoko antoka fa misy ROI tsara amin'ny fampiharana rehetra. Misy olona, ​​mazava ho azy, hanao tsindry ary hividy!
Iaraha-mahalala fa ny lakilen'ny fampitomboana ny tahan'ny fiovam-po an-tserasera dia ny fampihenana ny dingana ilaina hanovana. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia lojika ihany ny hoe misy dikany aloha ny fametrahana bokotra mividy tsy misy fangarony eo am-piandohana. Saingy tsy lojika izany. Ny fanamafisana ny fiovam-po dia manafoana ireo dingana nalaina tamin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana lasa fivadihana… ny olana dia tsy voatery hanana fanapahan-kevitra momba ny fividianana ny haino aman-jery sosialy.
Hiova ve izany? Azoko antoka fa ho tanteraka izany. Rehefa matoky ny kitapom-bolany bebe kokoa ny mpanjifa ary manomboka mahazo ny tsena ny tantaran'ny serivisy lehibe dia azo inoana fa hampiasa bebe kokoa ireo làlana ireo izy ireo. Na izany aza, tsy mbola hitako tsotra izao ny sosialy. Ary ny fifampitokisana dia fanalahidy tanteraka handresena ny fanapaha-kevitra momba ny fividianana.
Tsy misy amin'ireo sehatra sosialy manana isa azonao iantsoana amin'izao fotoana izao rehefa tojo olana ianao (angamba amin'ny fividianana no ataon'izy ireo, tsy azoko antoka). Tena te-tsindry ve aho? mividy ary mandefa baiko any amin'ny lavaka mangitsokitsoka, manontany tena raha handray ny entako aho, ary manontany tena hoe aiza no hahazo fanohanana raha tsy?
Toa ny tranonkala sosialy mifanaraka akaiky indrindra i Pinterest amin'izao fotoana izao satria maro amin'ireo mpihaino azy ireo no efa miantsena ary ny fantsona Pinterest dia afaka taratra akaiky ireo tranokala na marika nampirisihina.
Ireto misy ohatra momba ny fampiharana ny bokotra sosialy
Button Hividy Facebook:
Button Hividy Twitter:
Tombontsoa fividianana Pinterest:
Button Hividy Instagram:
Tags: Attributionfividianana bokotramividy facebookmividy instagraminvestppinterest mividymividy twitter